पत्रकार जगत नेपालको ‘बीपीको विद्रोह’ पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रथम जननिवार्चित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जीवनका विभिन्न पाटा र विद्रोहका आयाम समेटिएको पुस्तक ‘बीपीको विद्रोह’ बजारमा आएको छ । पत्रकार एवम् पत्रकारिताका उप–प्राध्यापक जगत नेपालले लेखेको उक्त पुस्तकको शुक्रबार पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकार्पण गरे ।
पुस्तक बाह्रखरी बुक्सले प्रकाशन गरेको हो। पुस्तकमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसहित राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि शर्मा, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, डा. ज्ञानु पाण्डेलगायतले टिप्पणी गर्दै विपीको नेतृत्व क्षमताको चर्चा गरेका थिए ।
पुस्तकमा बीपीका राजनीतिक संर्घष उनको विद्रोही सोच, तथा उनले झेलेका विभिन्न समस्याका विषय समावेश गरिएको लेखक नेपालले बताए । प्रजातान्त्रिक समाजवादका सुत्राधार एवम् राजनेताको छवि बनाएका बीपीका राजनीतिक जीवनका लुप्त पाटा र विद्रोहको आयाम पुस्तकमा समेटिएका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि बीपीले गरेको सङ्घर्ष, चालेको कदम, उनको विद्रोही चेतबारे पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।
तस्वीरः अभिषेक सापकोटा
प्रकाशित ७ मङ्गसिर २0७५ , शुक्रबार | 2018-11-23 12:05:14
पाँच वर्षीय बालिकालाई रक्त क्यान्सर, उपचारका
काठमाडौं । रक्त क्यान्सरबाट पीडित बालिका उर्वसी केसीको खर्च अभावमा उपचारमा समस्या भएको छ । दोलखा चरिकोट गाँउपालिका–५ घर भई हाल
मुस्ताङको कागबेनीमा पितृ तर्पण
म्याग्दी । मुस्ताङको कागबेनीमा तीर्थयात्रीको भीड शुरू भएको छ । शनिवारदेखि चैते दशैं शुरु भएकोले कागबेनीमा पितृ तर्पण दिए मुक्ति पाइन्छ
वीरगञ्ज, चैत २२ गते । हावाहुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लाका पीडितहरुलाई अव्यवस्थित रुपमा राहत वितरण भइरहेको व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला
१२ जना नेपाली किशोरीको नयाँ दिल्लीबाट
काठमाडौं । दिल्ली महिला आयोगले भारतको राजधानी सहर नयाँ दिल्लीका विभिन्न स्थानबाट छापा मारी १२ जना नेपाली किशोरीको उद्धार गरेको जनाएको